Ọtụtụ n'ime oge, Final Cut Pro X arụ ọrụ dị ukwuu. Ma, mgbe ọ na-adịghị, ebe a bụ ụfọdụ ihe ndị ị pụrụ-agbalị iji nweta gị usoro azụ nkịtị na oge.
Ebe a bụ ngwa ngwa ndepụta:
1. Kwụsịkwanụ na Malitegharịa ekwentị Final Cut
2. Lelee gị media
3. Hichapụ ijere faịlụ na re-aza
4. Mepụta ọbá akwụkwọ ọhụrụ
5. Mepụta ọhụrụ ọrụ na akaụntụ
6. Ahịhịa FCP X Mmasị
7. Wepụ na re-wụnye Final Cut
Ibidogharịa Final Cut releases na nwetaghachi ume na ebe nchekwa nke mere na ọ bụrụ na ihe e n'ịghagbu gị usoro, ibidogharịa Final Cut nwere ike idozi ya.
Ọtụtụ mgbe, nsogbu na-kpatara ka oyiyi na buru oke ibu. Amachi gị dijitalụ foto ọ dịghị ihe karịrị 5,000 pikselụ on a n'akụkụ. Final Cut bụ a video nchịkọta akụkọ, ọ bụghị a ka oyiyi nchịkọta akụkọ. Images na-oke buru ibu na-akpata nsogbu.
Ọzọkwa, ngwaahịa footage faịlụ na-mara ime ka nsogbu. Jide n'aka na-tọghata niile ngwaahịa footage ka ProRes 422 tupu importing n'ime Final Cut Pro X.
Emeghe gị Project na usoro iheomume ma họrọ File> Kachapụ Project enyenụ Files. Enyenụ faịlụ pụrụ ịghọ rụrụ arụ. Trashing ha agha Final Cut ike ọhụrụ ijere faịlụ nke mgbe ga idozi nsogbu.
Mepụta ọhụrụ Ọbá akwụkwọ na a ọhụrụ oru ngo. Mgbe ahụ, idetuo na mado ngalaba nke ochie oru ngo n'ime ọhụrụ oru ngo. Nwalee nkebi nke ọ bụla ruo mgbe ị na-ahụ ntụpọ nke na-adịghị arụ ọrụ. Na nke ihe, ị nwere ike wepu ma ọ bụ dochie ọjọọ media.
Open System Mmasị> Nnabata na ike a ọhụrụ ọrụ na akaụntụ. Nke a resets niile mmasị maka ma Final Cut na sistemụ azụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe defaults. Nanị nsogbu na-eme nke a bụ na a ọhụrụ ọrụ akaụntụ ike ịnweta faịlụ echekwara na Home ndekọ nke ochie ọrụ na akaụntụ. N'ihi nke a, mgbe m na-nwere ike ikwu na ịchekwa niile ọba akwụkwọ na mpụga ike draịva, ọ bụghị Home Directory.
6. Mkpofu FCP X Mmasị
N'ebemkpofuozi Final Cut Pro X mmasị faịlụ. E nwere dịkarịa ala atọ na mmasị faịlụ na, ọ bụrụ na ị nwere okuku, e nwere ike ndị ọzọ. Lee ndị nzọụkwụ:
Jide ala na Option isi na pịa na Go menu. The Library nchekwa n'ime gị Home Directory ugbu a na-egosi dị ka a nhọrọ n'ime a menu. (Ị nwekwara ike pịnye Mgbanwe + Wụk + G, ma ọ bụ họrọ Go> Gaa na nchekwa na Finder; mgbe ahụ, ụdị ~ / Library / na pịa Go.)
Na-emeghe ka Library> Mmasị nchekwa.
N'ebemkpofuozi ọ bụla ọzọ faịlụ na-amalite na "com.apple.finalcut".
Malitegharịa ekwentị Final Cut Pro X.
7. Wepu ma re-wụnye Final Cut
Ọ bụrụ na ihe niile ọzọ ada ada, ihichapụ FCP X si Ngwa na nchekwa ma re-wụnye ya na Mac App Store.
Otu n'ime ndị a usoro kwesịrị idozi nsogbu gị. Ọ bụrụ na, ọ bụ oge kpọtụrụ Apple Nkwado.
> Resource> FCP> Nchọpụta nsogbu Atụmatụ maka Final Cut Pro X